Uphazamisa entanyeni: ukuthi ungasusa kanjani, amathiphu awusizo. Indlela yokususa imibimbi entanyeni ekhaya
Intsha engunaphakade iyiphupho elingenakwenzeka, kodwa, noma kunjalo, wonke owesifazane ufuna ukuhlala isikhathi eside nesincane. Ukuchitha isikhathi nemali ekunakekeleni ebusweni, sivame ukukhohlwa mayelana nengxenye yomzimba ophazamisa iminyaka yokuqala yokukhohliswa - ngentambo nentambo yezintambo. Ngemuva kweminyaka engu-30 noma engu-25, kudingeka bazinake njalo, sebenzisa ama-creams namaski wokudonsa. Kodwa uma imibimbi entanyeni isivele ibonakale, sizozama ukuthola ukuthi kungani lokhu kwenzeka, nokuthi ungayibhekana kanjani nayo.
Izimbangela zamagebe entanyeni
Isizathu esiyinhloko sokubukeka kwamagebe azungeze intanyeni kuyinto yobudala. Ngokuhamba kwesikhathi, umzimba ukhiqiza i-collagen encane kanye ne-elastin, isikhumba siyaqina kancane, siqala ukugubha. Isici esengeziwe singase sibe izici zofuzo: qaphela isimo sesikhumba sikamama wakho noma ugogo, ukuthi uneminyaka engakanani abanamaphiko - cishe, okufanayo kuzokwenzeka kuwe.
Into elandelayo ngokuqondile ixhomeke kuwe. Ukuguquka okuqhubekayo ngesisindo ngenxa yokuthanda ukudla, ikakhulukazi okuqinile, kubangela ukuthi isikhumba siba lula kakhulu futhi siqala ukuguquka. Zama ukunamathela ngesisindo esisodwa somzimba, futhi uma uhlose ukunciphisa isisindo, bese ukwenza kancane kancane ungakhohlwa ukunakekela isikhumba sakho kahle, ukuphuculula kahle.
Indlela yokuphila ithinta isimo somzimba wonke, futhi isikhumba kuqala. Ukungabi nokulala nokuphumula okwanele emoyeni ovulekile, ukucindezeleka okuqhubekayo kuholela ekugugeni kwasekuqaleni. Ukunakekelwa okukhethekile kufanele kuhokhwe kumatress kanye nomcamelo olala ngawo: ingabe bavusa ukuchotshozwa kwesikhumba kanye nokutholakala kwamagugu engeziwe?
Amanzi ahlanzekile, ukuhamba ngaphandle, amavithamini namaminerali akusibophezelo nje kuphela sempilo enhle, kodwa futhi nokubukeka okuhle.
Ukunakekelwa kuhle, kodwa kufanele kukhethwe kahle. Ukubhekwa okuvusa amadlingozi kanye nokusetshenziswa okuvamile kwamaski okugcoba, ukunganaki izihlungi zelanga ezikhwameni kuholele emincintini entanyeni.
Siqeda imibimbi entanyeni ekhaya
Ngaphambi kokuba sibalekele salon beauty, sizozama ukuxazulula inkinga ekhaya.
Siqeda imibimbi entanyeni ngosizo lwezikhwama
Izindlela ezilula kakhulu futhi ezingabizi kakhulu zokuvimbela nokwelapha imibimbi kuyinto ukhilimu. Kumele kube yizinga eliphakeme, elinomsoco, liqukethe i-collagen ne-elastin ukuthuthukisa i-turgor. Ikhwalithi yemvelo yemvelo ingenziwa ngokwakho usebenzisa izithako ezilula.
I-egg emhlophe, uma isetshenziswe esikhumbeni nsuku zonke ngaphambi kokulala, inomphumela wokuphakamisa omangalisayo.
Ijusi le-leyimu igcoba isikhumba bese isusa imibimbi emihle.
Ngaphambi kokusebenzisa ukhilimu, ungasebenzisa i-compress salt. Dissolve 2-3 wezipuni zasolwandle usawoti (ungathatha usawoti weLwandle Olufile) ngo-0.5 amalitha amanzi, gcwalisa i-gauze bese usebenzisa i-compress entanyeni.
Iviniga ka-Apple ibhekwa njengesilingo esingummangaliso sokulondoloza ubusha nobuhle besikhumba. Bathungeza nge-swab yekotini bese usula isikhumba sentanyeni, vumela ukuthi ihlaziye.
Siqeda imibimbi entanyeni ngosizo lwamaski okuzithokozisa
Masks kufanele kwenziwe njalo 1-2 izikhathi ngeziviki. Ziklanyelwe ukuhlinzeka ngokudla okunomsoco kanye ne-hydration, kanye nokuqinisa isikhumba, imibimbi ebushelelezi nokuvimbela ukuvela kwamasha.
Amaprotheni kanye ne-oatmeal
Hlanganisa 100 gr. oatmeal kanye namaqanda amaqanda abilisiwe, engeza isipuni samafutha omnqumo kanye nejusi lemonti njengezithako ezondlekile. Ukuvumelana kufanele kufane ne-ukhilimu omuncu. Faka isicelo esikhunjeni sentamo bese ubamba imizuzu engu-15-20.
Gweba u-apula we-apula omuncu obomvu bese uxuba nobusi. Ukuthuthukisa umphumela, i-mask ingabanjwa imizuzu embalwa esiqandisini bese isetshenziswe entanyeni imizuzu engu-20.
Amanoni amaminerali ahlanganiswe namaprotheni anomphumela wokuphakamisa okumangalisayo futhi athuthukise izinhlangothi zentamo. Hlanganisa isipuni se-pharmacy glycerine evamile, engeza amanzi amaminerali amancane (kungcono ukuwuthenga ekhemisi) kanye neqanda elimhlophe. Hlanganisa zonke izithako ukhilimu. Faka isicelo engxenyeni bese ubamba imizuzu engama-30, sebenzisa ungqimba obukhulu lwe-ukhilimu obondla. Amaski afanayo angenziwa inkambo nsuku zonke emasontweni amabili.
I-Banana iyimthombo yamavithamini, futhi amafutha ayinomsoco. Hlanganisa i-pulp yebhanana nge isipuni samafutha e-flaxseed namafutha ambalwa we-pink ebalulekile. Faka isicelo esingqimba ebusweni nasentanyeni, ubambe imizuzu engu-20. I-cream ngemuva kwalesi maski ayikwazi ukusetshenziswa.
Siqeda imibimbi entanyeni ngosizo lokusila
Ukususa imibimbi entanyeni, sincoma amaseshingi avamile wokusilisa. Yenza ngamafutha okusikhipha umzimba owaxuba wona. Njengesizathu, thatha i-flaxseed, i-peach noma i-almond ama-almond, engeza kuwo amaconsi amancane we-ethereal, afanelekayo ngohlobo lwesikhumba. Ngamafutha omile, i-apricot kernel iphelele; for oily - jojoba noma itiye tree; amafutha omnandi omuncu omnandi.
Susa kusuka kwesikhumba ukwakheka bese usula nge-tonic efanelekile.
Faka isicelo esincane samafutha ezandleni zakho.
Ukwenza ukunyakaza kwesandla ngemuva kwesandla, kusukela ku-clavicles kuya ku-chin. Khokha ngokukhethekile ngesikhumba.
Ngabeka kancane iminwe yakho esikhunjeni sentamo yakho. Ungagudluli ngaphezulu.
Ukunyakaza okukhanyayo ukuhlunga isilwane, kancane kancane uye emaceleni ohlangothini entanyeni.
Isigaba ngasinye sigcwaliswa ukunyakaza kwe-stroking kusuka phansi phezulu.
Siqeda imibimbi entanyeni ngosizo lwama-gymnastics
Ukuzivocavoca okukhethekile kuzoqinisa imisipha yentamo futhi kwandise ukuqina kwesikhumba, ngaphezu kwalokho, kuthuthukisa ukujikeleza kwegazi, kushukumise ukuphuma kwayo esikhumbeni.
I-gymnastics elula kunazo zonke - ikhanda liphendukela ngakwesokudla nangakwesobunxele, ukujikeleza kumbuthano. Yenza konke ukunyakaza ngokushelelayo, uzizwe ukuhlukumeza kwemisipha ngayinye.
Phindela ikhanda futhi uvule umlomo wakho ngokubanzi. Zizwa ukuthi i-front surface yentamo isebenza kanjani.
Donsela phambili izindebe zakho njengokungathi uphonsela ikhandlela. Phindela ikhanda lakho bese udweba amafomu emoyeni.
Uma ulandela iseluleko sethu, khona-ke ngaphandle kokunzima kakhulu ukuqeda imibimbi entanyeni yakho ekhaya. Yiba njalo enhle!
Futhi uzoba nesithakazelo sokufunda imininingwane ye-Minus engu-10: Ukufaneleka kobuso kubathisha abadumile.
Imikhiqizo yokunakekela ngezandla zendabuko
Ukunakekela isikhumba esikhuniwe
Izindlela ezilula zokuba nesisu esinhle nesisicathulo
Ngendlela efanele ukuthatha ibhuku lokugeza
Ukuhwebelana kwabasebenzi: umsebenzi ekhaya
Izinzuzo nemikhiqizo yemvelo
I-Psychology: kanjani ukuthi ungayinaki inhlonipho
Isakhiwo semfundo ephakeme eNgilandi
Izinhlobo zabesifazane ngezikhathi zonyaka
Yeka ukulinda okuhle ngo-2018 Izinja zezimpawu ezahlukene ze-zodiac